MIUI 11 dia efa natomboka ho an'ny Redmi 5 sy Note 5 any Shina | Androidsis
Ny Redmi 5 sy Note 5 dia mahazo ny fanavaozana ny MIUI 11
MIUI 11 dia mivelatra eo anelanelan'ny telefaona Xiaomi sy Redmi. Omaly dia nilaza izany taminareo izahay ilay Redmi 8 sy 8A ireo izay efa nahazo ny kinova vaovao an'ny sosona marika, izay tsy isalasalana fa dingana iray lehibe amin'ity tranga ity. Ankehitriny dia misy maodely roa izay nandrasan'ny maro ny hananan'ireo izay manavao. Anjarantsika ny Redmi 5 sy ny Note 5.
Ho an'ny maro dia tsy ampoizina fa ny Redmi 5 sy Note 5 alao ny fanavaozana ao amin'ny MIUI 11. Satria ireo modely roa ireo dia efa taloha, saingy ny marika sinoa dia mazàna miasa tsara amin'ny fanavaozana ny sosona fanaingoany. Ka ireo maodely roa ireo dia mahazo ihany koa.
Ireo finday roa ireo dia mampiasa Android Pie, noho izany ny kinovan'ny MIUI 11 dia miorina amin'ity kinova amin'ny rafitra fiasa ity. Toa tsy handefa Android 10 ho an'ireo maodely ireo ny marika, tsy misy voalaza hatreto. Na izany na tsy izany dia tonga ny fotoana fanavaozana ity.
Efa navoaka tao Sina ny fanavaozana. Tahaka ny fanao mahazatra amin'ny orinasa, dia mila fotoana lavalava kokoa ny fanitarana manerantany, saingy zavatra tokony ampoizintsika fa hitranga amin'ny andro ho avy. Ka raha manana ny iray amin'ireo finday roa ireo ianao dia tsy hiandry ela intsony.
Hitantsika tsikelikely ny fomba MIUI 11 dia tonga amin'ny ankamaroan'ny maodely ny marika sinoa. Ny maodely toa ireto Redmi 5 sy Note 5 ireto dia afaka miditra aminy, zavatra izay tian'ny mpampiasa, satria mazava ny fanoloran-tenan'ilay orinasa manoloana an'io. Afaka mankafy ny vaovao izy ireo.
Ireo mpampiasa ivelan'ny Sina miaraka amin'ireo Redmi 5 sy Note 5 dia antenaina hanana fidirana amin'ny fanavaozana tsy ho ela. Hanomboka OTA izay ianao efa miaraka amin'ny MIUI 11 ary amin'ity fomba ity hahafahanao mankafy ireo fiasa rehetra ao anatiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Redmi 5 sy Note 5 dia mahazo ny fanavaozana ny MIUI 11
Nokia hanangana Smart TV any India atsy ho atsy
Xiaomi dia hanana telefaona misy efijery 120 Hz amin'ny 2020